Masuuliyiineey Tacsida iyo Tol-la’aydiina Maanta Hiil Berri Noogu Badala! – Radio Daljir
Masuuliyiineey Tacsida iyo Tol-la’aydiina Maanta Hiil Berri Noogu Badala!
Oktoobar 17, 2017 11:21 b 0
Nasiibdarrooyinku waa kala daranyihiin. Qarax kasta oo dhimasho iyo hanti bururbur keenaa waa nasiibdarro. Qarax bareer cad baabuur weyn saaran oo si joogto ah Soomaali, siiba reer Muqdisho, ugu keena dhimasho, dhaawac, halaag iyo hanti burbur waa nasiibdarro tan ugu daran. Waa nasiibdarro ay masuuliyaddiisa qaadayaan dhammaan masuuliyiinta umadda Soomaaliyeed. Waa mid ay masuul ka yihiin nin kasta oo maanta haya hoggaan Soomaaliyeed. Waa mid ay ka simayihiin Madaxweyne, Ra’iisul Wasaare, Xildhibaan, Madaxweyne Maamul Goboleed, illaa iyo siyaasiga kharriban ee Soomaali kala dilay, oo reerkiisa joogto ratiga ugu kacsada, si uu reer kale rajobeel uga dhigo, ama intaasba moog.
Ogaada hoggaanka Soomaaliyeed cir-ka-soodhac ma aha ee waa isla siyaasigii shalay; haddii uusan ahayna waa mid uu wato; waa isla kii reerkiisa iyo Soomaali oo dhan shalay halaagay oo kala diray. Waa isla kan lugta ku dhagan cid kasta oo hoggaan Soomaaliyeed qabata. Waa kan u hanjaba hoggaan walba oo Soomaali doorato. Waa kan dano siyaasadeed kula safta isla cadowgii shalay gacmaha iyo lugaha dadkiisa gooyey. Hoggaanka Soomaaliyeed oo awalba ajnabi u luga xirnaa, waa kan joogto u sii jillaafeeya.
Cadowgii Soomaaliyeed aragnay, waana annaga. Laakiin horta annagu haddii aan Soomaali nahay ma awoodnaa in aan intaas qirano, aqoonteeda se ma leenahay?
Siyaasiga Soomaaliyeed waa mid ay adagtahay in la kala saaro kan wanaagga Soomaali wada iyo kan xumaatada walaaqaya. Waa mid aan mabda’ iyo dadnimo toona lahayn oo maalin la safan kii shalay lugaha jarayey, maalin kalena aan la tusi karin. Waa nasiibdarada maanta iyo sida Soomaali noqotay. Waa nasiibadarro indhaheena oo shan ah aan raalli ka nahay. Waxaan raalli ka nahay siyaasiga aan la summad nahay, laakiin aan nala mabda’a ahayn. Waa siyaasiga danta Soomaaliyeed, mid fog iyo mid dhowba, aan marna maankiisa galin, laakiin ka raaca dantiisa maanta. Waa kan maanta kula ooyaya, laakiin markii uu hoteelkiisa tago aan dantaada iyo mid Soomaaliyeed aysan marnaba maankiisa ku soo degin. Waa kaas kan Soomaali ay maanta badbaado ka sugayso. Miyuu kaas na badbaadin karaa?
Hadaba nasiibdarro teebaa ugu daran? Ma qaraxa joogtada ah ee aan masuul, maamo, mabda’, daris, dowlad, ganacsade, iyo siyaasi uu illlaa iyo maanta u tabar la’yahay in uu ka hortago? Mise in qofka Soomaaliga ahi uu raalli ka yahay, welina rajo ka sugayo, isla siyaasigaas Soomaaliyeed ee 30 sano ku dhawaad la soo taagan tacsi iyo taloxumo?
Aan farta isku fiiqno haddaan Soomaali nahay. Aan farta isku fiiqno oo aan qirano in nala kala qoqobay, in nala kala qaybiyey, in uusan maanta jirin siyaasi siyaasi kale wax u sheegi kara, ama siyaasi siyaasi kale talo ka qaata, ama qaadasho haba noo danbeyso e, siyaasi siyaasi kale talo weydiista. Sidii shacabka Soomaaliyeed 30 sano kahor la isugu diray baa maanta falkeedaa iyo jidkaas mid ku dhow loo hayaa. Meel fog ha fiirin ee fiiri shirka Kismaayo. Fiiri Gaalkacyo. Fiiri Cadaado. Fiiri Beledweyne. Fiiri Xamar. Fiiri Baydhabo. Meel kasta fiiri, deedna isweydii “aaway siyaasi Soomaaliyeed oo leh siyaasad horusocod ah?”
Xukun oo Qaybi
30 sano ku dhawaad kabacdi haddii aan Soomaali nahay aan farta isku fiiqno; aan farta ku fiiqno hoggaan xumida Alle nagu saladay; aan farta ku fiiqno in aan garan la’nahay meesha nala ka haysto; xataa haddii aan isku waafaqno in hoggaan xumo jirto, war hoggaanku waa meerto e, aaway mucaarad maanta la dhihi karo waa mid danta Soomaaliyeed u taagan. Bal 30 sano kabacdi yaa haya mucaarad matali kara danta Soomaaliyeed? Yaa haya muxaafid waddani ah? Horta mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliyeed maanta ma leeyihiin midabo iyo mabaadii lagu kala saari karo? Haddii maya, sabab? Soo lama dhihi karo meesha fikir ma yaal ee xukun raadis oo kaliya baa yaal?
Bal dhan kasta fiiri, hoggaanka Soomaaliyeed tiri, oo baasaboorada ajnabi tiri; oo tiri carruur masuuliyiin Soomaaliyeed oo dugsi Soomaaliya ku yaal u kallahda. Horta dalka weli ma laga cararayaa, mise dalka waa la degganyahay?
Maanta hoggaanka Soomaaliyeed maxaan ugu nimaadnaa? Ma Madaxtooyo iyo xafiisyo dowlo oo lala fadhiyo xin, xan, been aan lala xishoon, hebel reer hebel ma rabo, iyo hebel Federaal raalli kama aha? Bal xukuumadda Soomaaliyeed inta istaagto oo tacsida naga yarayso, ha tiriso dadka ay masuuliyadda umadda u dhiibtay; ha qiimayso in ay Soomaali u qalmaan, in ay u qalmaan shaqada loo igmaday; qof walbaa taariikh buu leeyahay e, taariikhdooda ha ogaato; ha noo sheegto waxa ay Soomaali la rabto; ha noo sheegto oo ha la soo shirtagto sida ay Soomaali u midaynayso ayada oo aan mudacyo hoosta ku sidan, mindiyana soofaysan.
Xukuumaddu ha ogaato xukun wanaag iyo dowladnimo waxay kuu jirtaa inta ay runtu kuu jirto. Illaa run la sheegana Soomaali argagixiso iyo gacan ajnabi lugta kalama bixi doonto.
Haddii aysan dowladdu (DFS) intaas awoodin, oo fulay xankiisa ma mooga e, aysan shacabka Soomaaliyeed uga jawaabin su’aalaha iyo shakiga ka dhex guuxaya, aysan runta u sheegin, aysan ayadu runta isu sheegin, ha ogaato siyaasiga kharriban ee Soomaaliyeed baa Soomaali jawaab diyaar ula ah, run iyo been, hadba tii dantiisa waafaqsan. Haddii taasi dhacdana, cadow Soomaaliyeed iyo qarax argagixiso oo si wadajir looga hortago warkooda daa’.
Walaaloow ku Mee?
Hoggaanka Soomaaliyeed weli han bay Soomaali u haysaa; laakiin waa in uu Soomaali hoggaamiyo – ajnabi hoggaami lama dhihin. Waa in uu Soomaali “walaaloow” ku hoggaamiyo, maankana ku hayo “rag walaalow wax uu ku dhaamo la waa.” Kuwii tan ka horeeyey xasuuso iyo liidnimadoodii “fad ama waa lagu fadsiin” iyo meel ay ku danbaysay.
Bogga Daljir in aan maanta ku qorno, “hoggaanka Soomaaliyeedoow is waca oo iska war qaba,” waa noo sharaf, idinkana waa idiin xasuusin. Shalay haddii aydan israbin, midkiina uusan kan kale arki karin, oo aad isku wada udheen, qaraxa maanta ha idin walaalaysiyo. Ha idin xasuusiyo in danta idin ka dhexaysaa ay ka mug weyntahay xoogaaga yar ee aad isku haysaan. Markii aad mid tihiin baad walaalo tihiin. Midnimadu waa mid soojiidata maalgashiga ajnabiga, ee ma aha mid hortaagan; waa mid umadda u roon, waana marka kaliya oo dantiina guud iyo tiina goboleed aad ajnabiga ka fushan kartaan.
Ugu danbeyn, haddii aad baasabooro ajnabi wada wadataan, ogaada weli Soomaali baad tihiin, dadkiinuna waa Soomaali, waana Soomaali cidla ciirsila taagan, oo rag Rabbi buu leeyahay e, aad maanta rag u tihiin. Ha fashilinina ummadda Soomaaliyeed, idinna ha ku fashilmina hoggaanka umadda.
Qormooyinka Daljir 52 Siyaasadda & Dhaqaalaha 481 Wararka 21399
Sheeko Gaaban: Sheekada Ismadhaanto – Taxanaha 9aad